धनराजले ल्याए ‘शताब्दीमा लायन्स’, शतवार्षिकीमा सय जना सम्मान गर्ने लायन्सको घोषणा
आखिर यसमा खास के छ ? खास के छ भन्ने प्रश्नको जवाफ हुन् लायन धनराज आचार्य
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । लायन्स क्लब, नेपालमा यस्तो चर्चित संस्था हो, कुनै बेला ‘घरानीया’हरुको मात्र संस्थाका रुपमा चिनिएको यसलाई यतिबेला लगभग दोस्रो पुस्ताका युवा, उद्यमी र पेसागत व्यक्तित्वहरुले आफ्नो सेवामूलक थलोका रुपमा चिनाउने चौतारो बनेको छ, लगभग मध्यम वर्गीय मानिसहरुको खुसी उपार्जन गर्ने मञ्चका रुपमा चिनिन पुगेको छ ।
सय बर्से अवधिमा नेपालमा लायन्सको यो उचाई सायद दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको भन्दा निकै उम्दा देखिन्छ, गतिशीलताको पर्याय बन्न पुगेको देखिन्छ– विशेष गरी ३२५ बी–१ ।
नेपालमा १९७१ देखि यात्रा गरेको लायनवादको ‘मोटो’ आज धेरै युवाहरुको चुम्बकीय आकर्षणको केन्द्र जस्तै बनेको छ ।
लायन्स क्लबका अन्य धेरै क्लबहरु भन्दा पनि चुम्बकीय आकर्षणकै केन्द्र बन्न पुगेको छ ३२५ बी–१ ।
आखिर यसमा खास के छ ?
खास के छ भन्ने प्रश्नको जवाफ हुन् लायन धनराज आचार्य ।
आफ्नो निजी जिन्दगीमा उनले के कति पाउँछन्, कति गुमाउँछन्, त्यसको लेखाजोखा उनी आफैले गरुन्, तर रातविरात नभनी लायन्सको परोपकारी मञ्चलाई गतिको पनि गति दिने ‘ड्राइभर’ सरह बन्नपुगेका छन् उनी ।
निर्माण सञ्चारको सम्पादकका रुपमा पछिल्ला दिनमा कार्यरत यो पंक्तिकार (नवराज खतिवडा) ले सायद २ वर्ष अघि ३२५ बी–१ ले निकालेको ‘दीक्षान्त’को सम्पादनको अवसर पाएको थियो ।
जतिबेला धनराजको अहोरात्र खट्ने बानीको झझल्को मिलेको थियो । बस् यति भन्दा के भनौं । सबै लाग्नेहरु यसैगरी त लाग्लान् ? जुन संस्थामा आफू लागेको छ, त्यो के हो ?, त्यसको इतिहास कस्तो छ ?
आफ्नो समाजमा त्यसको असर सकारात्मक छ वा नकारात्मक र भावी दिनमा त्यसलाई आफू र आफ्नो समाजसँग कसरी मिलाएर लैजाने ? याबत् कुरामा पछि लाग्ने सबैका सबैले सोच्ने सायदैले गर्छन् ।
एउटा अघि लागेको देखेर पछि लाग्ने हुलमा थोरै मध्ये पर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिए ‘शताब्दीमा लायन्स’ पुस्तक नेपालका लायन्सलाई दिएर ।
विमोचन समारोहको प्रमुख आतिथ्यता अन्तर्राष्ट्रिय डाइरेक्टर लायन सञ्जय खेतानले गरेका थिए । आफ्नो मन्तव्यको समयमा उनले धनराजको ‘धन’ र ‘मन’बारे सांकेतिक तर धेरै कुराहरु भने ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता मल्टिपल चियर पर्सन लायन बालकृष्ण बुर्लाकोटी र जिएमटी एरिया लिडर लायन खगेन्द्र संग्रौलाले संयुक्त रुपमा गरेका थिए ।
उनीहरुले मन्तव्य क्रममा भनेका वाक्य ‘जिन्दगीमा यसरी अटो दिने सेलिबे्रटी सरह भइएछ’ ले पुस्तक शताब्दीमा लायन्स प्रति लायन्स सदस्यहरु कति लालयित रहेछन् भन्ने देखाउँथ्यो ।
कार्यक्रममा लायन्स लिडरहरु सम्मानित पनि भएका थिए ।
शतवार्षिकीमा सय व्यक्तिको सम्मान गर्दै लायन्स
सोही अवसरमा लायन्स क्लब ३२५ बी–१ ले राजधानीमा घोषणा गर्यो ‘एक सय व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने’ ।
पत्रकार सम्मेलन मार्फत् लायन्स क्लब ३२५ बी–१ ले लायन्सको दोस्रो शताब्दीको प्रारम्भदेखि बाल स्वास्थ्य सेवा र मधुमेह रोग विरुद्ध विश्वभर अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय डाइरेक्टर लायन सञ्जय खेतानले गरेका थिए ।
भूकम्प पछि लायन्स
नेपालमा २०७२ वैशाख १२ को भूकम्प सँगै लायन्सले आफूले गरेका उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माण अभियानबारे समेत जानकारी गराइएको थियो ।
भूकम्प अति प्रभावित गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ लगायत जिल्लामा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग एमओयू पछि यतिबेला लायन्स विभिन्न ८ ओटा विद्यालय पुनःनिर्माण गरिरहेको जानकारी लायन गिरिधारी शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गोरखामा ४, दोलखामा ३ र साँखुमा १ विद्यालयहरुको अत्याधुनिक सेवा सुविधा सहित मापदण्ड भित्र रही पुनःनिर्माण भइरहेका छन् ।
तिनमा श्री शक्ति सेकेन्डरी स्कुल, सिद्धदेवी स्कुल चनौटे, मनकामना स्कुल गोरखा, हिमालय स्कुल सिमजुङ गोरखाका विद्यालयहरु हुने भने धर्मशाला बिएस क्षेत्रपा, दोलखा, धनमाले विद्यालय जिरी, भीम सेकेन्डरी स्कुल भीमेश्वर दोलखाका विद्यालयहरु रहेका छन् ।
काठमाडौं जिल्लास्थित साँखुको भाग्योदयो उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत यही च्याप्टर अन्र्गत पुनःनिर्माण गरिरहेको शर्माले बताए ।
आगामी सन् ०१८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर ती कामहरु अघि बढिरहेका छन् ।
यसबारे पूर्ण विवरण तल प्रकाशित गरिएको छ–
यस्तो छ लागतको आँकडा-
यतिबेला विश्वभर २११ राष्ट्रमा लायन्स क्लबको विस्तारित सञ्जाल रहेको छ भने ४७ हजार ५ सय क्लब र ती क्लबहरु मार्फत् साँढे १४ लाख मानिसहरु सेवा नै धर्म हो भनेर अभियानमा लागेको खेतानले ठोकुवा गरे ।